WAXAY NA BADEEN WAX NA BAREEN BAA NOOGA DARAN
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa QAR BURO LAGALAMA GUURO. bal dib u milicso kacdoomadii qabaliga ahaa ee soomaray Somaliya mudadii sanadaha badan ahayd, kahor inta aanay maxaysatada Xabashida iyo saaxiibadeeda aan kor iyo hoos toona wax u fiirin ay soo galeen kuna baaheen gudaha dalka.
Marnaba mooryaantii soomaalidu kama aanay tegi jirin axsaanka maatida, walow ay dhibaato xadigeeda leh umada ku hayeen hadan waxbay lakala hari jireen, waxaaba laga heli jirey nin mooryaana oo yiraaha war aan iska siidayno, xataa qaarkood waxaa ay ka xishoon jireen umulaha inaan la kufsan, qaar kalana waxaa ay wax ku xeerin jireen qaab qabiil, reer hebel beri bay sidaas wanaagsan noola dhaqmeen ee bal aan maanta kuwaan u sii deyno ayaaba marmar loogu baxsan jirey.
Inkastoo Dab saarku jirey, hadana waxaa ay wax ku layn jireen micne gaara ooy markaa mooryaanta iyo hor joogayaashoodu ay dan gaara bidayeen, marnaba xaalku ma gaari jirin waxa haatan ay nabareen maxaysatada xabashidu.
Hadii qarax hoobiye ama noocii doonoo madfaca ha ahaadee lala beegsado koox mooryaana fariisinkood waxaa ay kaga aargoosan jireen fariisin kale oo ay leeyihiin kuwa soo beegsaday, marnaba madaafiicda sida maxaysatada xabashida lama aanay beegsan jirin maatida umana aanay qaybin jirin xaafadaha aan dadka waxba galabsani joogaan.
Bal u fiirso waxay nabareen. xabad hadii lagu rido kuwa maxaysatada Xabashida ama maryoolayda askar maroodiga ah ee ay adeegsadaan waxaa baas lala beegsadaa islaamo shaah miis la fidhiya oo agoon aabayaashood tageen waxuun nolol maalmeeda uga radinaya.
Markii aad booqatid baraha amaba Boggaga wararka waxaa markiiba kugu soo boodaya maqaalo dhiilo xambaarsan oo oranaya, qarax ayaa lala beegsaday Ciidanka DKMG ah inkastoo aan la xaqiijin qasaaraha uu geystey, qaraxan waxaa uu galaaftay nolosha tiro dada oo rayid ah kadib markii ay rasaas aan loo aaba yeelin ku jawaabeen ciidanka DKMG ah. ciidamadaasi waa kuwii hore u ahaan jirey miliishiyo beeleedyada, waxaana ay casharkan ka dhaxleen maxaysatada xabashida.
Dib ufiiri hab dhaqankii miliishiyo beeleedyada. waxaa ay ahaayeen kuwo dadka ku waxyeeleeya baro iyaga u cayiman sida Baro koontarool iyo wax lamida , waxaa taasi bedelkeedii maxaysata laga bartay in Goobaha ganacsiga xoog lagu galo, si bareerana loogu geysto Dhac, Dil ,Xarig iyo handadaad, iyaga oo kuwa waxashi nimadaasi ku kacayaana yihiin kuwo gashan dirays ceebeedka maxaysatada xabshida iyo Askar maroodigooda.
Hal haysyada maliishiyaadka qabiilka waxaa kamid ahaa, naga reeba masaajid ayuu naga galaye, waxaana taasi bedelkeeda maanta laga dhaxlay maxaysatada Xabashida iyo caruurta la ciidameeyey in xurmadii masaajida iyo Goobaha cibaadadu ay noqdaan kuwa aan micnaba lahayn lana mida sida goobaha ganacsiga iyo guryaha caadiga ah gudahana loo galo lagana qafaasho culumaa'u dinkii ku cibaadaysanayey.
Waa nasiib daro in maanta markale caasimadii Somaliya uu ka dilaaco cago barar ay sabab u yihiin xaalado la abuuray, waa nasiib daro in maanta markale 3 milyan dad kabadan ee kusugnaa caasimada dalka ay xabsi guri ku qaataan noloshooda mudo aan la shaacin.
ugu danbayntiina DKMG ah ee xalkeeda siyaaso iyo keeda aqooneedba uu ku soo ururay dilka boobka iyo barakicinta shacabku way ku guul daraysatay inay xakamayso caruurta la ciidameeyey in lagu ilaaliyo awaamiirta lafarayo.
Faafin: SomaliTalk.com | July 11, 2007